अब सबै श्रमिकलाई पेन्सन - सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा हुँदै, उत्सवका रुपमा मनाउन सरकारको आग्रह. - Kendra Khabar
अब सबै श्रमिकलाई पेन्सन – सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा हुँदै, उत्सवका रुपमा मनाउन सरकारको आग्रह.
२०७५, ११ मंसिर मंगलवार ०५:२२
सरकारले विशेष कार्यक्रमका साथ मंगलबार सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गर्दैछ ।
श्रमिकको हकहितलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पहिलो पटक श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्न लागेको हो। काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा हुने विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गर्नुहुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन मन्त्रालयले सबै सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थालाई अनुरोध गरेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक र रोजगारदाताले गरेको योगदानका आधारमा आकस्मिक रुपमा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्न र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन अगाडि सारिएको सुरक्षा कार्यक्रम हो।
हाललाई पहिलो चरणमा यस योजनाले औपचारिक क्षेत्रको प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकहरुलाई समेट्ने छ। दोश्रो चरणमा अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई यस योजनाले समेट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसमा रोजगारदाताले २ हजार ६ सय ९० रुपैंया थप्नेछ । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको मासिक योगदान ४ हजार १ सय ६९ रुपैंया ५० पैसा
हुनेछ । यही रकमबाट सरकारले बिभिन्न स्किममार्फत श्रमिकलाई सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।